प्रथम उपराष्ट्रपति चिल्डे«न गेम सोमबारदेखि नेपालगन्जमा हुदै – Sadarline
६ जेठ, नेपालगन्ज : ५ नं. प्रदेशका १२ जिल्ला सहभागि हुने प्रथम उपराष्ट्रपति चिल्डे«न गेम प्रतियोगितामा सोमबारबाट बाँकेको नेपालगन्ज रंगशालामा शुरु हुने भएको छ ।
सो प्रतियोगिताको आयोजक आईतबार मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबादेखि हुने उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन गेमको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ ।
मध्यपश्चिम खेलकुद बिकास समितिका अध्यक्ष भिम वलीले उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन गेममा छनैट भएका खेलाडीलाई केन्द्रीय स्तरको प्रतियोगिताको लागि छनौट गरि प्रतिस्पर्धी गराईने बताए ।
उनले प्रतियोगिताका लागि सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकहरुका लागि आवासको ब्यबस्था होटल ब्याबसायी संघलाई जिम्मा लगाएको पनि जानकारी गराए । प्रतियोगिताको उद्घाटन बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (कं) बाट निर्वाचित सांसद कृष्णा केसी नमुनाले गर्ने तय भएको छ ।
प्रतियोगितामा १२ जिल्लाबाट खेलाडी, र प्रशिक्षक गरि ३ सय ९६ को उपस्थिती रहने र प्रतियोगितामा कक्षा ६, ७ र ८ का १४ वर्ष मुनिका बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने छ । एथ्लेक्टिस, लङ्गजम्प, ट्रिपल जम्प, र सटपुट छात्र र छात्राहरुको सहभागिता जनाउने छन । कराते, उसु, तेक्वाण्डो, छात्र÷छात्रा,ले सहभागिता जनाउने छन ।
सदरलाइन / सुनिता बर्मा ७ जेठ, नेपालगन्ज : सरकारी उपेक्षाका कारण माटाको भाँडा बनाई जिविकोपार्जन गर्दै आएका नेपालगन्ज–८ कसगरटोलका युवापुस्ता आफ्नो पुर्खेउली पेशाप्रतिको चासो घट्दै गएको छ । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका–८की १६ वर्षिया सनम कसगरले परम्परागत रुपमा माटाको भाँडा बनाउदै आए पनि मेहनत अनुसारको बजार मूल्य नपाईएको कारण आफुहरुमा यो पेशाप्रति […]
३२ असार २०७५, सोमबार ०९:४३